Ingcebiso ethembekileyo yokonga umbane kunye neemveliso zokhuselo lokusingqongileyo
Ixesha Post: Sep-01-2020
Izinto ezininzi ezisebenza kakuhle kwiscreen sesixhobo sokuhlola esenziwe ngabantu nesikrelekrele esiyilwe yinkampani yethu ngokwemfuno zentengiso kunye nokusebenza kwemveliso. Ukusebenza kunye neempawu element multi kahle eliphezulu sc ...Funda ngokugqithisileyo »
Izakhono zokukhetha zescreen sokungcangcazela kwescreen
1. ngokokukhetha indawo Ubude kunye nobubanzi besiza kufuneka buqwalaselwe ngohlobo lokuvavanywa kokungcangcazela komgama; ngamanye amaxesha ububanzi beplagi yescreen sokungcangcazela komda bunqunyelwe, kunye nokuphakama kwesiza i ...Funda ngokugqithisileyo »
Imoto yokungcangcazela ayinamanzi
Yonke inkqubo yovavanyo yemoto engcangcazelayo kukujonga kunye nokulinganisa izixhobo. Izinto zokubalula ezahlukeneyo zahlulwe zangaphezulu kunye nezinto ezisezantsi. Ukuhlolwa kokuvavanywa kufanele kube phezulu, isihlobo ...Funda ngokugqithisileyo »
Umahluko phakathi kwentshukumo yemoto kunye nemoto eqhelekileyo
I-Vibration yeemoto: I-motor vibration ixhotyiswe ngeseti yeebhloko ezinokuguquguquka kwi-shaft shaft, kwaye amandla oxhokonxa afunyanwa ngamandla e-centrifugal aveliswe kukujikeleza kwesantya esikhulu kunye nebhloko ye-eccentric. Uluhlu lokuhamba kwentshukumo ye ...Funda ngokugqithisileyo »